DADANÌ - I-Airbnb
San Giovanni Gemini, Sicily, i-Italy
I-Casa DADANÌ imaphakathi ne-San Giovanni Gemini, enkabeni ye-Sicily, idolobha eliphilayo esifundazweni sase-Agrigento. Itholakala ngaphansi kwe-Riserva Oriented Monte Cammarata, lapho ukwazi khona ukuthatha uhambo olude, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni kanye nohambo oluqondisiwe, ihlangana ezindaweni eziningana nedolobhana laseCammarata, izindlu zalo ezibekwe cishe ukwenza indawo yokuzalwa kukaKhisimusi, eziyela-panorama abasizakali ngu embhoshongweni Castle ukuthi ivelele phezu insimu.
Yindlu esanda kulungiswa, esitezi sokuqala sebhilidi engihlala kulo, kodwa izimele: ifinyelelwa ngezitebhisi ezimfushane. Indlu inehholo elikhulu, amagumbi okulala amabili azimele, igumbi lokugezela elineshawa kanye negumbi lasekuseni elihlome ngokuphelele. Uzothola indawo entsha, ehlanzekile futhi ehlotshiswe kahle.
I-Casa DADANÌ itholakala enkabeni yomlando yedolobha, ngemuva kwe-Mother Church, enobufakazi obungokomlando. Umakhelwane ukhululekile futhi uthule; kuba mnandi ngoMgqibelo ekuseni, lapho imakethe yamasonto onke iqala ukusebenza eduze nangezimpelasonto kusihlwa, lapho uzithola usendaweni yokuphila yasebusuku ekhazimulayo yedolobha. Ngenyanga kaNhlangulana, okuyisonto lesibili, kwenzeka uMkhosi odumile kaJesu waseNazaretha oheha izivakashi nabazinikele kulo lonke elaseSicily nangale kwayo. I-Casa DADANÌ, nesikhundla sayo esiyinhlanhla, igxile ekushayeni nasenhliziyweni ye-folkloric yephathi.
I-Casa DADANÌ izimele, kodwa ngihlala esitezi esiphezulu sesakhiwo esifanayo ngakho-ke ngizohlala ngitholakala nganoma yisiphi iseluleko noma izidingo. Izivakashi zizothola umhlahlandlela omfishane wezindawo ezikhanga izivakashi zendawo kanye nezindawo ezingachitha ubusuku obuhle nobujabulisayo.
I-Casa DADANÌ izimele, kodwa ngihlala esitezi esiphezulu sesakhiwo esifanayo ngakho-ke ngizohlala ngitholakala nganoma yisiphi iseluleko noma izidingo. Izivakashi zizothola umhlahl…